Fikarohana momba ny cybersecurity 2021: Manambany ny mety hisian'ny fanafihana an-tserasera ny fikambanana
Home » Lahatsoratra farany farany » Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! » Fikarohana momba ny cybersecurity 2021: Manambany ny mety hisian'ny fanafihana an-tserasera ny fikambanana
Ny rojo famatsiana sy ny loza ateraky ny antoko fahatelo dia loza mitatao ho an'ny teknolojia fampandehanana
- Ny fahatokiana be loatra dia manambara ny fanitsakitsahana ho avy: 73% amin'ny CIO sy CISO dia "matoky tena" fa tsy hiharan'ny fandikana OT amin'ny taona manaraka.
- Mbola eritreretina ihany ny cybersecurity: Ny fiantohana amin'ny cyber dia heverina ho vahaolana ampy amin'ny 40%
- Ny fahasarotana dia mampitombo ny risika: 78% amin'ireo namaly no tojo ny fahasarotan'ny mpivarotra maro
Fikarohana vaovao nataon'i Skybox Security nahita fa ny 83% amin'ny fikambanana dia niharan'ny fanitsakitsahana ny fiarovana an-tserasera momba ny teknolojia (OT) tao anatin'ny 36 volana teo aloha. Ny fikarohana ihany koa dia nahatsikaritra fa ny fikambanana dia manao tsinontsinona ny loza ateraky ny cyberattack, miaraka amin'ny 73% amin'ny CIO sy CISOs "matoky tanteraka" ny fikambanany dia tsy hiharan'ny fanitsakitsahana OT amin'ny taona manaraka.
"Tsy ny orinasa ihany no miantehitra amin'ny OT, ny vahoaka amin'ny ankapobeny dia miankina amin'ity teknolojia ity ho an'ny serivisy tena ilaina ao anatin'izany ny angovo sy ny rano. Indrisy anefa fa fantatry ny cybercriminals fa malemy amin'ny ankapobeny ny fiarovana ny fotodrafitrasa. Vokatr'izany, ireo mpisehatra fandrahonana dia mino fa ny fanafihana ransomware amin'ny OT dia mety handoa vola, "hoy ny tale jeneralin'ny Skybox Security sy ny mpanorina Gidi Cohen. "Tahaka ny firoboroboan'ny faharatsiana amin'ny tsy firaharahiana, ny fanafihana ransomware dia hanohy hanararaotra ny fahalemen'ny OT raha mbola mitohy ny tsy fandraisana andraikitra."
Ny fikarohana vaovao, Ny risika amin'ny cybersecurity teknolojian'ny asa dia nohamaivanina be, dia mamoaka ny ady mafy atrehin'ny fiarovana OT - misy ny fahasarotan'ny tambajotra, ny silo miasa, ny risika amin'ny rojo famatsiana, ary ny safidy fanarenana ny vulnerable voafetra. Ireo mpisehatra fandrahonana dia manararaotra ireo fahalemena OT ireo amin'ny fomba tsy manimba ny orinasa tsirairay fotsiny – fa manohintohina ny fahasalamam-bahoaka, ny fiarovana ary ny toekarena.
Ny zava-dehibe azo avy amin'ny fandalinana 2021 dia ahitana:
Manambany ny mety hisian'ny fanafihana an-tserasera ny fikambanana
Ny enina amby dimampolo isan-jaton'ireo namaly rehetra dia "matoky tena" fa tsy hiharan'ny fanitsakitsahana ny OT amin'ny taona manaraka ny fikambanany. Na izany aza, 83% ihany koa no nilaza fa nanana fanitsakitsahana fiarovana OT iray farafahakeliny tao anatin'ny 36 volana teo aloha. Na dia eo aza ny fanakianana ireo fotodrafitrasa ireo, ny fomba fiarovana eo amin'ny toerany dia matetika malemy na tsy misy.
Ny CISO dia manasaraka ny fahatsapana sy ny zava-misy
Telo amby fitopolo isan-jaton'ny CIO sy CISO no tena matoky tena fa tsy ho voahitsakitsaka ny rafitra fiarovana OT azy ireo amin'ny taona manaraka. Raha ampitahaina amin'ny 37% amin'ny mpitantana orinasa ihany, izay manana traikefa mivantana kokoa amin'ny vokatry ny fanafihana. Na dia mandà tsy hino aza ny sasany fa marefo ny rafitra OT, ny hafa kosa milaza fa efa akaiky ny fanitsakitsahana manaraka.
Ny fanarahan-dalàna dia tsy mitovy amin'ny fiarovana
Hatramin'izao, ny fenitry ny fanarahan-dalàna dia hita fa tsy ampy amin'ny fisorohana ny lozam-pifamoivoizana. Ny fitazonana ny fanarahana ny fitsipika sy ny fepetra no zava-dehibe indrindra amin'ny mpamaly rehetra. Hitombo hatrany ny fepetra takiana amin'ny fanarahan-dalàna raha jerena ny fanafihana vao haingana momba ny fotodrafitrasa manan-danja.
Ny fahasarotana dia mampitombo ny risika fiarovana
Valo amby fitopolo isan-jato no nilaza fa sarotra amin'ny fiarovana ny tontolo iainan'izy ireo ny fahasarotana noho ny teknolojia multivendor. Ankoatr'izay, ny 39% amin'ireo namaly rehetra dia nilaza fa ny sakana lehibe indrindra amin'ny fanatsarana ny programa momba ny fiarovana dia ny fanapahan-kevitra raisina amin'ny vondron'orinasa tsirairay tsy misy fanaraha-maso foibe.
Heverin'ny sasany ho ampy ny fiantohana fiantohana amin'ny cyber
Ny efatra amby telopolo isan-jaton'ireo namaly no nilaza fa ny fiantohana fiantohana amin'ny cyber dia heverina ho vahaolana ampy. Na izany aza, ny fiantohana fiantohana amin'ny cyber dia tsy miantoka ny "orinasa very" lafo vidy vokatry ny fanafihana ransomware, izay iray amin'ireo olana telo lehibe indrindra amin'ireo namaly ny fanadihadiana.
Ny famakafakana sy ny famakafakana lalana no laharam-pahamehana voalohany amin'ny fiarovana an-tserasera
Dimy amby efapolo isan-jaton'ny CISO sy CIO no milaza fa ny tsy fahafahana manao famakafakana lalana manerana ny tontolo iainana mba hahafantarana ny tena zava-misy dia iray amin'ireo olana telo lehibe indrindra momba ny fiarovana. Fanampin'izay, nilaza ny CISO sy CIO fa ny maritrano tsy mitongilana manerana ny tontolo OT sy IT (48%) ary ny fifandonan'ny teknolojia IT (40%) dia roa amin'ireo loza telo lehibe indrindra amin'ny fiarovana.
Ny silo miasa dia mitarika ny hantsana sy ny fahasarotan'ny teknolojia
CIOs, CISOs, Architects, Injeniera ary Mpitantana Fambolena dia samy mitanisa ireo silo miasa ho anisan'ny fanamby lehibe indrindra amin'ny fiarovana ny fotodrafitrasa OT. Ny fitantanana ny fiarovana OT dia fanatanjahantena ekipa. Raha mampiasa boky filalaovana samihafa ny mpikambana ao amin'ny ekipa, dia mety tsy hiara-handresy izy ireo.
Ny rojo famatsiana sy ny loza ateraky ny antoko fahatelo dia loza mitatao lehibe
Ny 46 isan-jaton'ireo namaly no nilaza fa ny rojo famatsiana/fahazoan'ny antoko fahatelo amin'ny tambajotra dia iray amin'ireo loza telo ambony indrindra amin'ny fiarovana. Na izany aza, XNUMX% ihany no nilaza ny fikambanany ho politika fidirana amin'ny antoko fahatelo izay mihatra amin'ny OT.